ကြွား Wallpaper — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
သငျသညျကွနေ့စဉ်သတိပေးထားဖို့လို ကြွားဖို့ built? ကျနော်တို့အတူတူသင့်ရဲ့ဖုန်းများအတွက်အနည်းငယ်နောက်ခံပုံထားပြီးပြီ, တက်ဘလက်, ဒါမှမဟုတ် desktop. အဝါကွှားလိုဂိုနှင့်အတူအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောသုံးရိုးရှင်းတဲ့ရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်. နောက်ပိုင်းတွင်လာဖို့ပိုရှိပါတယ်. နှစ်သက်!
iPhone ကို Wallpaper ကို Download လုပ် • အိုင်ပက် Wallpaper ကို Download လုပ် • Desktop ပေါ်မှာ Wallpaper ကို Download လုပ်
ဒါဝိဒ်သည် • ဧပြီလ 9, 2014 တွင် 2:52 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
လဲလှယ်† • ဧပြီလ 12, 2014 တွင် 5:04 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
နောက်ခံပုံများ bro မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်. သူတို့ကိုချစ်တယ်. ရုံကွှားပွောထက်သူတို့ကိုဝေး သာ. ကြီးမြတ်အဓိပ္ပာယ်ကိုရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်တစ်ဦးကစစ်မှန်သောဘုရင်ကပေါ်ကွှားပွော, ယရှေုသညျ. မင်္ဂလာရှိသောနေပါ. †
Lee က • ဧပြီလ 16, 2014 တွင် 5:45 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
နောက်ခံပုံမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်. ငါသည်သင်တို့ကိုမှတက်ကြည့်ရှုနှင့်သင့်ခြေလှမ်းတိုင်းလှုပ်ရှားမှုတိုင်းကိုစောင့်ကြည့်. ငါသည်သင်တို့၏ထိုကဲ့သို့သောအပြုသဘော romodel တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်
မင်းတုံး • ဇွန်လ 9, 2014 တွင် 12:54 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ကျွန်မခရီးစဉ်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်, ငါတကယ်ငါအမှနျနားထောငျပါအရာတိုင်းကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေါ့, ၎င်းကအသက်တာ၌ may သညျဘုရားသခငျ၏ဘုနျးတျောထွန်းလင်းနှင့်သင့်မိသားစုရဲ့ forver. ငါသည်သင်တို့၏သားဂြိုလ်မြေကြီးတပြင်ထဲမှာ luckiest များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုပြောလိုအပ်ပါတယ်. ထိုမင်းသည်ဧကန်အမှန်အစက်ရုပ်မဟုတ်ဘူး. #116 #rhemaprocess @iamslizybolt
Pamela • သြဂုတ်လ 29, 2014 တွင် 5:59 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
သငျသညျခရီးစဉ်ကျေးဇူးတင်ပါသည်. သင်၏စကားသည်ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားမသာပေမယ့်သူတို့သညျငါ့ကိုကိုယ်တော်နှင့်အတူငါ၏အကြားဆက်ဆံရေးအပေါ်အာရုံစိုက်စောင့်ရှောက်ကူညီပေးရန်. အချစ်များစွာ.
ခရစ် • စက်တင်ဘာလ 12, 2014 တွင် 4:43 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
bro ဟေး, ကြီးမားသောပန်ကာ, ဘုရားသခင်သင့်ကိုကောင်းချီးပေးပါစေ. ငါတို့သည်ခရစ်တော်၏အတွက်တဝတည်းဖြစ်ကြ၏.
irenesalcedo • စက်တင်ဘာလ 23, 2014 တွင် 4:52 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ငါ့နာမကိုအိုင်ရင်း salcedo ဖြစ်ပါသည်, ငါစည်းလုံးပြည်နယ်များအတွက်တပ်မတော်အစေခံခြင်းနှင့်ငါဝိန်း Fort Bliss မှာတပ်စွဲငါ, TX. ငါစင်ပေါ်မှာနှင့်အတူအမေသိလိုက်ရတယ်သင့်ရဲ့အကြီးမားဆုံး fans.This ယခုနှစ်တဦးတည်းဖြစ်၏4lymphoma ကင်ဆာ. သူမပထမဦးဆုံးပြသခံခဲ့ရသည့်အခါ, ဆရာဝန်များကစင်မြင့်မှာပြောပါတယ် 2, သူတို့စင်ပေါ်မှာနှစ်ယောက်သူမ၏ကုသ Chemo စတင်. မကြာသေးခင်ကသူတို့ကပထမဦးစွာစိစစ်ကနေရလဒ်တွေကိုနှိုင်းယှဉ်, ရာသူတို့တစ်တွေဇာတ်စင်ပြောပါတယ် 2, တကယ်တစ်ဦးစင်မြင့်ခဲ့ 4. ဒါဟာသူတို့ရဲ့အမှားဖြစ်ခဲ့သည်. ငါ့အမိတုန်းပဲဇာတ်စင်ကုသနေပါသည်4ဆဲ chemo မှတဆင့်မယ်. chemo သူမကဓါတ်ရောင်ခြည်ကိုစတင်ရပါလိမ့်မယ်ကျော်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်, ကျနော်တို့အားလပ်ရက်များအတွက်သူမ၏န်းကျင်မဖွစျနိုငျ. ငါသည်သင်တို့ကိုယောက်ျားတွေတောင်းသမျှသော, သူမ၏နျြးမာရေးအတှကျဆုတောငျးပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်. သူမသည်သညျဘုရားသခငျ၏ကျွန်ဖြစ်ပါသည်နှင့်သခင်၏နည်းလမ်းများငါ၏အ sibilings နှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြတော်မူပြီ. တဖန်ဘုရားသခင်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက်ကြောင်းနေ့စဉ်ကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေး, ကိုယ့်သင်ရုံသင့်ရဲ့ဆုတောင်းသူမ၏စောင့်ရှောက်သောမေးဖို့, သူမ၏အမည်အား Yvonne ကက်စထရိုသည်အ.
ဂျူလီယာပွတ် • အောက်တိုဘာလ 14, 2014 တွင် 9:38 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါလိုအပ်သမျှဖြစ်ပါသည် 1:16 ငါ၏သခင်အပေါ်ဝါကွှားမှ, ကြှနျုပျ၏ရှငျဘုရငျအပေါ်ကြွား. သူသည်ဤအရာပြေး cuz နေ့စဉ် im '' အကြောင်းပြောဆို! နောက်ခံပုံမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, ခရီးစဉ်ကို!
phhil • ဒီဇင်ဘာလ 6, 2014 တွင် 4:49 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
thankz သူဌေးက, ယခုပငျငါ့ dextop နောက်ခံဝါကွှားကြည့်ရှု….